Mazano Anobva Kubasa Maitiro Okusvina kunze Dharodar Zvinyorwa kubva paIndaneti Yenyu
Kushanda webhusaiti kunogona kufadza sezvo ichikupa mukana wakaisvonaka wokukura bhizinesi rako rekuInternet. Inokupawo mukana wekugadzira mikana mitsva mubhizimusi rako. Zvinosuruvarisa, vamwe vanoita spammers vachaedza kuparadza mabhizinesi enyu eInternet pasina chikonzero - umziehen ohne stress. Max Bell, iyo Semalt Mutengi Achibudirira Mutungamiri, anotsanangura kuti ava vanoita zvekushandiswa kwekombiyuta vanoita zvakawanda sezvavanokwanisa kuita zvipingamupinyi zvevashandisi vewebhu uye kutumira spammers hazvisi izvo. Ivo vari pakati pevanyengeri vanoita zvekutsvaga vanoita sangano rekutsvaga, uye kana iwe usingafariri zvakakwana, vanogona kuparadza zvirongwa zvako zvose. Kana iwe uchitarisa Google yako account analytics uye ukaona kuti pane dzakawanda dzinotumirwa kubva pawebsite dzisinganzwisisi kune sevha yako, pane zvingangoita kuti darodar kutumira kunotarisa nzvimbo yako uye iwe unoda kutora matanho ekukudzivirira.
Kusarudza spam migwagwa
Kukwanisa kuchengetedza webhusaiti yako kuumba mabhoti aya, unofanirwa kuvaona pakutanga. Nzira dzekutengesa kwenhema idzi dzinotumira zvinyorwa zvinobva kunzvimbo yako yekugara uye dzinoedza kuvanza mazita ekutanga. Izvo zvinotaurwa zvinotsausa, uye kana ukakundikana kuzviona panguva, zvinogona kukonzera kurasikirwa kukuru. Mushure mekuzvizivisa, iwe unogona kubva uine mazano ekudzivirira. Imwe nzira dzakanakisisa dzekuvhara darodar kutumira dzinosanganisira:
Kushandisa filters yeGoogle Analytics
Ita mafaira muGoogle analytics account iyo ichakubatsira kuti uwedzere kukosha kwekutengesa kwako. Izvi zvichakubatsira iwe kubvisa zvisingadi kuendeswa, uye iwe unongosiyiwa nezvose zvaunoda. Iwe uchava nemhando dzakasiyana-siyana dzaunogona kuisa mubhuku rako reGoogle analytics saka kudzivirira va spammers kuti vasvike pawebsite yako, uye iwe unogona kuzvidzorera kune yavo yepaiti. Google filtics filters inokupa nzira dzakasiyana siyana dzekuvhara darodar traffic referrals, asi kusakosha kukuru kwemuitiro ndeyokuti haugone kushandiswa munzvimbo dzakawanda panguva imwechete.
Vhura IP address yavo
Kuvhara kero ye IP rearodar yokutumira zviri nyore. Izvi zvichaita kuti vese vanotsvaga vasabvumirwe kuwana webhusaiti yenyu iyo inoita kuti zvive nyore kwavari kutumira zvinyorwa zvisingazivikanwi.
Chengetedza urongwa hwekuregererwa
Iva nechokwadi chokuti iwe wakachengetedza mazita ekutsvaga kweGoogle analytics. Izvi zvichaita kuti uone kuti unogona kutanga kunakidzwa nekushanda kwewebsite yako murugare. Google ichakupa runyora rwezvinhu kuti urege kubvisa uye kudzivisa kero ye IP. Nzira iri nyore ndeyokuisa pureji-yepawebsite yako kuti ive nechokwadi chokuti yakachengeteka uye yakachengetedzwa.
Kuvapo kwekutumira spam kunogona kuva dambudziko guru kuongorora mazuva e-e-business mabasa akawanda. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti webhusaiti yako nguva dzose inoshanda zvakanaka kuti uwedzere kukura kwako, asi mabhoti haazokubvumi. Zvinotonyanya kuipa kana iwe usingazivi kuti ungazviona sei uye chii chaunofanira kuita kuvadzivisa. Mazano anotaurwa pamusoro apa achakubatsira kuchengetedza webhusaiti yako pasina mahwendefa aya, uye iwe unogona kuvanyorera nyore nyore kuvadzivisa kushanyira domain yako websaiti. Ramba wakakosha uye uve mutariri!